विविध कार्यक्रम Archives - Citypokhara
शुक्रबारदेखि पोखरामा ‘नेपाल लिटरेचर फेस्टिबल’
२०७६ मंसिर् २४ , मंगलवार December 10, 2019 by Yunish Gurung
पोखरा । आईएमई नेपाल लिटरेचर फेस्टिबलको ८ औं संस्करण शुक्रबारदेखि पोखराको बाराहीघाट लेकसाइडमा हुने भएको छ । आयोजक बुकवर्म फाउन्डेसन र र्‍यान्डम रिडर्स सोसाइटीले सोमबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलनमार्फत फेस्टिबल मंसिर २७–३० गतेसम्म आयोजना हुने जानकारी दिएको हो । �
‘मलाई नसोध, कहाँ दुख्छ घाउ!’
२०७६ बैशाख १९ , बिहीवार by Citypokhara.com
राति बेस्कन पानी परेको थियो। राति पानी नपरेकै भए पनि आकाश नीऽऽऽऽऽऽलो नै हुन्थ्यो। हिजो राति मोबाइलको बत्तीले टलक्क टल्किएको हिलोमा क्याचक्याच टेकेर म फोनको नेटवर्क खोज्दै पऽऽऽर थुम्कोसम्म पुगेकी थिएँ। 'म सक्दो प्रयास गर्दैछु, तर ढुक्क हुनुस् भन्न सक्दिनँ।' बीच
‘आमा म पनि धेरै धनी छु नि,मसँग पनि स्तन र योनी छ’
२०७५ पौष ९ , सोमबार December 25, 2018 by Citypokhara.com
म हरेक गल्लीमा असुरक्षित छु आमा त्यो सडक,घर, स्कुल, कलेज, चिया पसल सबै सबै ठाउँमा । तिमी सोच्छौ होला आमा सुनचाँदी, पैसा केही छैन छोरीसँग कसरी असुरक्षित हँ रु तर थाहा छ आमा तिमीलाई आजभोलि छोरीसँग लुटिन धन हैन नी स्तन र योनी हेरिन्छ । अनि आमा सानो हुँदा सकी नसक�
कविता:जो कहिल्यै फर्किएनन !
२०७५ कार्तिक १३ , मंगलवार October 30, 2018 by Citypokhara.com
पुर्णिमाको रातहरुमा चम्किरहेका लाखौं ताराहरु औंसीको रातमा कहिल्यै फर्किएनन् ।। बाग्मती नारायणी कर्णाली कोसी महाकाली खोला बनेर बगिरहे । समुन्द्र बनेर कहिल्यै फर्किएनन् ।। माछापुच्छ्रे धौलागिरी सगरमाथामा सुर्यको किरण सधैं मुस्कुराईरहे। कालापानी लिपुले�
साहित्यकार गीता खत्रीको “अन्त्यहिन ईच्छा” को परिचर्चा आज पोखरामा
२०७५ असोज १७ , बुधवार by Citypokhara.com
पोखरा । साहित्यकार एवं अन्तराष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजका पुर्व अध्यक्ष तथा बोर्ड अफ ट्रस्टीका वर्तमान उपाध्यक्ष गीता खत्रीको कथा संग्रह “अन्त्यहिन ईच्छा”को परिचर्चा, अनुभव र अनुभुति सहित सम्मान कार्यक्रम आज पोखरामा हुने भएको छ । साहित्यकार गिता खत्रीले बिशे
महिलाको योनी र अनुहार किन सबैभन्दा असुरक्षित ?
२०७५ असोज १२ , शुक्रबार by Citypokhara.com
कुरा गर्न हिजोआज विषय चाहिँदैन, जहाबाट सुरु गरे पनि बलात्कारको विषय आइहाल्छ । समान पेशामा भएका एक पूर्व सहकर्मीसँग व्यक्तिगत भलाकुसारी र समसामयिक विषयमा कुरा हुँदै थियो । उनले बीचमै सोधे, ‘तपाईँको मनमा डर छैन ?’ अपर्झट आएको यो प्रश्नले केहीबेर अक्क न बक्क भएँ । उन�
कार्यालय सहयोगी हुँदै मालिक बनेका किसान
२०७५ भाद्र २२ , शुक्रबार by Citypokhara.com
पोखरा । जब उनी मजदुरी गर्छु भन्दै जान्थे, भारी बोक्न सक्दैन भनेर फर्काइदिन्थे । स्कुलको बसमा काम गर्छु भन्दै पुग्थे, सानो मान्छे राख्न मिल्दैन भनिदिन्थे । सेक्युरिटी गार्ड बस्छु भनेर पुग्थे, गेटमै निदाउँछस् हुँदैन भनिदिन्थे । किसान सुनारलाई आपत प¥यो, अब के गर्ने �
संघर्षशिल महिला उद्यमी सीता बराल
२०७५ भाद्र २१ , बिहीवार September 6, 2018 by Citypokhara.com
कञ्चन थापा । सर्धै हँसिलो मुहार । जोसँग भेट्दा पनि मुस्कुराउने स्वभाव । अनि त्यो मुस्कुराहटभित्र लुकेको व्यवसायिक लगाव । यही लगावले पोखरा मात्र हैन देश विदेशमा लगनशिलतको छाप पारेकी छन् उनले । तीज या अरु कुनै विशेष अवसर आउनेवित्तिकै साथीभाइले उनको नाम सम्झन्छन्, �
२०७५ भाद्र १५ , शुक्रबार August 31, 2018 by Citypokhara.com
सुरज श्रेष्ठ । “जसले फुटबल बुझ्दैन उसले कुनै खेलजान्दैन” ।यसको अर्थ विश्वभर फुटबल खेल चर्चित छ भन्ने हो । युरोपबाट शुरु भएको यो खेल अहिले विश्वभरका जनताको मनपसन्द खेल भएको छ । फुटबलमा लागेर प्राईभेट जेट चडेर हिड्ने खेलाडीहरुको संख्या पनि विश्व भर बढ्दो छ । यद्यपी
२०७५ भाद्र १३ , बुधवार by Citypokhara.com
पोखरा । गजल प्रतिभा पुरस्कार–२०७५ गजलकार जीवनपानीलाई प्रदान गरिने भएको छ । गजल सन्ध्या पोखराले प्रदान गर्दै आएको पुरस्कार यसपाली स्याङ्जाका गजलकार जीवनपानीलाई अर्पण गर्ने निर्णय भएको हो । गजलकार प्रकट पगेनी ‘शिव’को संयोजकत्वमा गठित प्रतिभा छनोट समितिले २ दशकद